FISOLOKIANA VOLA : Mpino amina fiangonana zandriny miisa 6 voasambotra teny Anosy
Voasambotry ny Polisy ekonomika Anosy ny 04 sy 05 oktobra 2019 lasa teo, teny amin’ny Carlton Anosy sy Itaosy ny olona miisa enina noho ny resaka fisandohana andraikitra, fakana vola tsy ara-drariny ary fisolokiana. 10 octobre 2019
Araka ny fanazavana voaray bebe kokoa mahakasika ny raharaha, ny volana septambra 2019 lasa teo dia nisy ramatoa iray lehibem-piangonana zandriny eto an-drenivohitra voalaza fa manana raharaha nahavoasaringotra azy any amin’ny sampan-draharaha miady amin’ny kolikoly. Nisy lehilahy iray nanatona azy an-tsokosoko ary milaza fa mitana toerana ambony eto amin’ny firenena ary vonona ny hamaha ilay olana mianjady amin’ity ramatoa mpitondra fiangonana zandriny ity.
Nilaza ihany koa ity lehilahy ity fa mahafantatra olona ambony amin’ny sehatra maro isan-karazany ary nanonona anaran’olona mihitsy izy saingy mba hamahana ny olan’ ilay ramatoa dia mila manome vola ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny misahana ny dosie ilay ramatoa raha te ho voavaha haingana ny olany. Taorian’ny fifandresen-dahatra sy ny ady hevitra dia nilaza ilay lehilahy fa 20 tapitrisa ariary ny fahalalam-pomba hozaraina amin’ireo olona ambony ireo, ary nomena ny 04 okobra 2019 lasa teo izany. Raha vantany vao nahare izany ireo fianakaviana dia mailo ka nampandre haingana ny Polisy ekonomika Anosy izy ireo.
Rehefa tonga ny fotoana nifanomezana dia raikitra ary fa eny Anosy no hifanoloran’ny roa tonta ny vola. Noraisin’ny Polisy ekonomika Anosy avy hatrany ny andraikitra ka ny marainan’ny 04 oktobra lasa teo, teo amin’ny “parking Carlton” Anosy no natao ny fanomezam-bola. Olona 02 no voasambotra teo noho eo ka ilay lehilahy nilaza fa mitana toerana ambony eto amin’ny firenena ny iray miaraka amina lehilahy iray akaiky azy. Ny hariva tamin’ny 04 ora dia nosamborina teny Tsaralalàna ny lehilahy iray sy ny vehivavy iray izay mpiray tsikombakomba aminy ary nisy ihany koa ny fiantsoana lehilahy iray hafa tety Anosy ny ampitso ary dia voatazona ihany koa ity farany izay mpivavaka ao ihany koa.
Ny 05 oktobra lasa teo dia lehilahy iray koa no nosamborina teny Itaosy izay Pasitera ihany koa ny asany ary anisany tompomarika tamin’izao fisolokiana izao. Nandritra ny fanadihadiana no nahafantarana fa sady tsy mitana toerana ambony ilay lehilahy fa misoloky fotsiny. Fantatra ihany koa fa iray fiangonana ny ankamaroan’ireto voasambotra ireto ary misy rohim-pihavanana ihany koa ny sasany amin’izy ireo. Miisa enina ankehitriny ny fitambaran’ny olona voasambotra niray tsikombakomba tamin’ity raharaha ity .
2019-10-14 19:47:19 par MIKA
Mba te haka toeran ambony kou iz ireo dia nidady hevitr,mb hanongotana n mpitondr hatr@ iz,nef n marin d marin ihan.ka horera-maina foana eo n fahavalo.
Zazavavy 15 taona niteraka tsy fidiny tamin-drainy niteraka azy FANOLANAN-JANAKA (260) 21 février 2020 Niatrika famotorana savaranonando omaly maraina NY RADO RAFALIMANANA (205) 19 février 2020 Zandary iray nitifitra nahafaty ny Raibeny, nitifi-tena koa izy ka maty AMBALAVAO (179) 18 février 2020 Nidina ifotony nijery ny fanamboarana ny Kianja Barea ny Filoham-pirenena FANATANTERAHANA NY VELIRANO (174) 18 février 2020 Nikononkonona korontana saingy nalaky voafehy ny filaminana MPIVAROTRA ENY ISOTRY (148) 17 février 2020 An-dalam-panafoanana ny “Easy Park” FANDRINDRANA NY FIFAMOIVOIZANA (131) 19 février 2020